Archive du 20190520
Kandida milaza tsy handray karama Lainga sy fitaka hakana fom-bahoaka…
Nambaran’i Andry Rajoelina tamin’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana filoham-pirenena fa “tsy handray karama aho rehefa tonga eo amin’ny fitondrana, fa homeko hanasoavana ny vahoaka”.
Basikety “Smatch-in” andiany fahavalo Tompondaka ny DEGS sy ny ENS
Nafana ny lalao famaranana sokajy lehilahy, teo amin'ny DEGS sy SMIA.
Telma Coupe de Madagascar Hanao famaranana ny Fosa Juniors sy ny Cnaps Sport
Ny ekipan’ny Fosa Juniors Boeny sy ny Cnaps Sport Itasy no tafavoaka ho mpandresy tamin’ny manasa-dalan’ny fifaninanana baolina kitra “Telma Coupe de Madagascar 2019” ka hihaona amin’ny lalao famaranana hotanterahina amin’ny 01 na 02 jona 2019 any amin’ny toerana mbola hofaritana.
“Rallye Motul” andiany faharoa Bona sy Ny Anjara no voalohany
Nangotraka ny hazakazaka fiarakodia “Rallye Motul” andiany faharoa notanterahina teny Anjeva-Masindray, nitohy tany Talatan’i Moronkay-Imerikanjaka-Ambohitrandriamanitra ny faran’ny herinandro teo,
Baolina kitra vehivavy Diviziona Elite Lasan’ny Askam Itasy ny amboara 2018
Nifarana tamin’ny sabotsy 18 mey 2019 teo teny amin’ny kianjan’i Carion ny tamin’ny alalan’ny fanatontosan’ny andro faha-7 ny andiany faha-3 ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny
Hanome rariny ny jiolahy…
Miditra amin’ny herinandro farany amin’ny fampielezan-kevitry ny fifidianana solombavambahoaka isika. Samy manana ny fomba heveriny fa maharesy lahatra azy, ka hisafidianany kandida iray ny olom-pirenena.
Isaorana ianareo mpitondra tarihin’Andriamatoa filoha tamin’ny fikarakarana manetriketrika ny “FIHARIANA”.
Fandaharan’asa FEC Singa ara-toekarena maro no dinihina
Findramam-bola ataon’ny Banky Foiben’i Madagasikara ny fandaharan’asa Facilité Elargie de Crédit (FEC) fa tsy an’ny fanjakana. Maro be ny singa ara-toekarena hanaovan’ny BFM fanadihadiana mialoha ny firosoana amin’ny fifanarahana.
BE VAOVAO LOZAM-PIFAMOIVOIZANA ROCADE
Taksibe marika 407 no tra-doza, ny zoma hariva teo, teny amin’ny Rocade mampitohy an’Ivato Tsarasaotra, vokatry ny fandehanana mafy. Naratra mafy ny mpamily sy ilay vehivavy iray teo anilany.
KANDIDA MISY MITORY
Kandidà vavy iray izay mivelona amin’ny bizna tany no misy mitory eny amin’ny zandary misahana ny heloka bevava amin’izao fotoana.
Tonelina Ambohidahy Zazavavy kely nokendain’ny renibeny saika maty
Zazavavy kely iray manodidina ny valo taona no kendain’ny renibeny ny alakamisy hariva teo tao ambanin’ny tonelin’Ambohidahy nandritra ilay fitohanana be iny.